Dagaal la filayo in taageerayaasha maxaakiimta ee ku sugan Baydhabo ka billaabaan Baydhabo gudeheeda, Guddoomiye Shariif Xasan oo maanta aadaya Dubai, iyo xildhibaannada jooga Nayroobi oo la filayo in ay soo saaraan baaq xabad joojin ah oo ay ku dalbanayaan in ay Ciidamada Itoobiya ka baxaan Soomaaliya. Ruunkinet 22/12/06
Warar aan la xaqiijin oo aan ka helnay magaalada Baydhabo ayaa ku waramaya in la filayo in taageerayaasha maxaakiinta ay weerar la ma filaan ah ka dhex bilaayaan magaalada Baydhabo.
Taageerayaasha maxaakiimta ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale la sheegay in ay xiriir joogta ah la leeyihiin midowga maxaakiimta ee ka taliyo magaalada Muqdisho.
Sidoo kale, waxaa dagaal culus mar kale maanta ka billowday degaanka Idaale ee gobolka Bay oo dhawaan dagaal culus ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo kuwa maxaakiimta.
Dhanka kale, guddoomiyaha baarlamaanka ayaa la sheegay in uu maata aadaya magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta.
Guddoomiye Shariif oo dhawaan qado sharaf ugu sameeyay xildhibaannada ku sugan magaalada Nayroobi ayaa sheegay in uu doonayo in la qaboojiyo xaaladda ka aloosan Soomaaliya si wadahadal ahna lagu dhameeyo dagaalada u dhexeeya Itoobiya iyo maxaakiimta.
Sidoo kale, xildhibaanno ka badan 40 mudane oo ka tirsan golaha baalamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nayroobi ayaa la sheegay in ay doonayaan in ay dhawaan soo saaraan qoraal ka dhan ah dagaalka ka soo cusboonaaday Soomaaliya ee u dhexeeya Itoobiya oo garab siineysa dowladda Prof. Cali Geeddi iyo midowga maxaakiimta.
Warka ayaa intaasi ku daraya in qoraalka mudanayaasha ay ku doonayaan in ciidamada dowladda Itoobiya ka baxaan Soomaaliya si loo dhex dhexaadiyo dowladda federaalka ah iyo wadaaddada hubeysan ee ka taliya inta badan koonfurta Soomaaliya.